ZEC Yotarisira Kupeta Gwaro Idzva reVavhoti Mukupera kweGore
Sachigarfo weZEC Amai Rita Makarau
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amai Rita Makarau vanoti vanotarisira kuti panopera gore rino vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Izvi zviri kuitwa sezvo nyika iri kutarisira kuita sarudzo gore rinouya.
Vanotiwo mukupera kwemwedzi uno vanenge vave nemichina yose inodiwa mukunyoresa vavhoti. Nemusi weChishanu, ZEC inoti yakakwanisa kupihwa michina mazana mana pamichina zviuru zvitatu zvakatengwa nehurumende kubva kukambani yeLaxton Group yekuChina.
Amai Makarau vanotiwo vanhu vanokwanisa kuvhota nezvetupa zverata musarudzo dzegore rinouya. Mashoko aya anotevera zvainge zvambotaurwa namabharani mukuru wehurumende vaTobaiwa Mudede avo vainge vati vanhu havakwanise kuvhota kana vasina zvitupa zvebepa.
Amai Makarau vanoti kana vachinge vapedza kugadzira gwaro revavhoti vanofunga kuti sarudzo dzinenge dzokwanisa kuitwa.